Eleghara, Tụọ na Lekwasịrị Anya | Martech Zone
Eleghara, Tụọ na Lekwasịrị Anya
Wenezdee, Machị 11, 2009 Saturday, January 11, 2014 Douglas Karr
Gregg Stewart nwere ọmarịcha ọkwa ọ na-agwa okwu Njikọ Ahịa na Dewa Gbasara Gbasara. Mgbe ị nwetara ohere, biko gụọ ọkwa ahụ ma tụlee - ọ bụghị naanị ndụmọdụ - kama ọ bụ azịza enyere. Otu n'ime ihe ngwọta ekwuru bụ Aprimo. Aprimo bụ ụlọ ọrụ dị na Indianapolis nke enwere m obi ụtọ ịgwa ya izu ole na ole gara aga banyere mgbasa ozi mmekọrịta, njikarịcha search engine na ịde blọgụ.
Site na mkpọtụ nke ngwa ọrụ mgbasa ozi ndị a niile oge, onye na-ere ahịa na-agba ọsọ site na ngwá ọrụ gaa na ngwá ọrụ dị ka onye nzuzu na-achọ ijide. Ihe niile dị ọhụụ, ihe niile dị mma… ọ bụ grail dị nsọ nke iwulite mmekọrịta na ndị ahịa. Ana m echegbu onwe nke ukwuu banyere ndị enyi m n’achụmnta ego ahụbeghị ụdị anụ ahụ mbụ.
Nke a bụ ndụmọdụ m dị mfe maka ndị na-ere ahịa n'Onlinentanet:
Elegharala ihe ọ bụla anya - Abụ m onye nkwado nke ịnwale ihe niile iji nweta ya ma chee echiche banyere ike na adịghị ike ya. Ọ bụrụhaala na enweghị ezigbo ihe kpatara na ọ ga-emebi azụmahịa gị, nye ya ogbugba!
Tụọ ihe niile - ihe niile ị gbalịrị ka a tụrụ ma obere oge na ogologo oge. Echetara m mgbe ndị mmadụ na-eji akwụkwọ ozi eme ihe ozugbo, ha ga-anwale ya otu ugboro wee kwupụta na ọ .ụrụ. Ọ bụrụ n ’ha mere ya ugboro abụọ ruo ugboro atọ, ọ nwere ike rụọ ọrụ karịa nrọ ha. Nye ya ohere tupu ị kpebie na ọ bụ igbu oge.
Lekwasị anya n’ihe na-arụ ọrụ - ihe kpatara m ji bụrụ nnukwu onye na-akwado ịde blọgụ bụ na anyị maara na ọ na-ewepụta ọtụtụ ọdịnaya, injin ọchụchọ na-achọta ma na-ebugharị ọdịnaya ahụ na ndị na-achọ ya dị mkpa, ọ na-eme ka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa mgbe emechara nke ọma. Malite na ntọala nke nnukwu ọdịnaya agaghị emechu gị ihu.
Abụghị m onye na-eleghara uzu ahụ anya, mana m na-a attentiona ntị na nyocha m ma tụọ mmetụta nke otu m si eji ndị a dị iche iche dị iche iche. Ozugbo m nwere obi ike na ejirila m onye na-ajụ ase nwee ike ime ihe, ekpebiri m ebe m ga-elekwasị ike m.
Ruo ọtụtụ afọ, nke ahụ laghachiri m na blọọgụ m.
Tags: Elekwasị anyaeleghara anyaTụọ
Kedu ihe bụ RFM nke Blog gị?
Na ire ahia dika otutu ihe obula, oburu n’enyeghi usoro ntuziaka na ntuziaka maka ụfọdụ mkpọsa ma ọ bụ ihe aga-eme, kedu ka ị ga - esi nweta ma ọ bụ mara mmụba? Ekwenyere m na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịchọpụta teknụzụ ọhụụ yana ịmara ihe ọhụụ ọhụụ, mana ịghọta ndị na-ege gị ntị, yana ụzọ na ụzọ ha họọrọ ịnata ozi site na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ịnọ na-akpọtụrụ na-abụkarị ezigbo akara ngosi nke etu esi ụzọ ndị ọzọ iji gwa ha okwu ma gbasaa ozi gị.
Otu n'ime ihe ụlọ ọrụ anyị mere bụ ijide n'aka na anyị ghọtara n'ezie ndị na-ege ntị, ihe isi ihe mgbu ha bụ, ebe ha chere maka ozi na akụrụngwa, wdg. Nke a na-enyere aka imetụta otu anyị si azụ ahịa ha. Ọ bụrụ na anyị achọpụta ihe na-eme na ụfọdụ ụlọ ọrụ ebe ha maara nke ọma ma tụkwasị obi n'ụdị ahịa ahịa ụfọdụ, anyị na-ekwusi ike ndị ọzọ na mkpọsa anyị.
Weten meten! Measuretụ bụ ịmata.
Dead nwụọla, Christa! Mara ndị na-ege gị ntị na ịlele nsonaazụ ya bụ isi ihe na-eme ka enwekwu ọganiihu. Daalụ nke ukwuu maka isonye na mkparịta ụka ahụ!